प्रधानमन्त्रीलाई मात्र टेर्ने खतिवडाका यतिधेरै गल्ति कसले सुधार्ला ? – Halkhabar kura
१३ भाद्र २०७७, शनिबार १८:१०
प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र र भएभरका अवसरलाई हेर्ने हो भने डा. युवराज खतिवडा अहिलेसम्मकै विद्वान अर्थमन्त्री हुन् भन्न सकिएला । हुन पनि विभिन्न नेतासँगको सामिप्यतालाई समयानुकूल प्रयोग गरेका कारण पछिल्लो डेढ दशकमा मात्रै आकर्षक जति सबै अवसर लिन सफल भए । राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पार्टीलाई लात हानेर योजना आयोगको सदस्य बने । त्यसपछि राष्ट्र बैंकबाट बेतलबी बिदा लिएर श्रीलङ्कास्थित राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा जागिर खान गए । उनैलाई पछि एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले श्रीलङ्काबाट बोलाएर आयोगको उपाध्यक्ष बनाइदियो । राज्यमन्त्री सरहको उपाध्यक्षमाभन्दा कनिष्ठ हैसियतको गभर्नर पदमा ‘ग्ल्यामर’ देखेपछि नोटमा दस्तखत गर्न दौडिएर राष्ट्र बैंक पुगे ।
उनको विद्वताको अनुमान गरेरै प्रधानमन्त्री ओलीले एकाएक साँढे दुई वर्षअघि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्रीबाट नसोचेको समर्थन प्राप्त गरेपछि चर्को विद्वता छाँटेका अर्थमन्त्रीले यसबीचमा गरेका केही निर्णय भने उदेकलाग्दा छन् । कतिपय निर्णय देख्ने र सुन्नेलाई समेत कुरीकुरी लाग्ने खालका छन् । वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण नगरेर नाफा नोक्सानको वास्तविक अवस्थाको भेउ नै पाउन नसकेको राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा खतिवडाले अचम्मको विज्ञ सञ्चालक नियुक्त गरिदिए ।
Previous ६ महिनाको बच्चा लिएर श्रीमती न्यायको खोजिमा (भिडियो हेर्नुस्)
Next बामदेवलाई फेरी धोका : खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा लैजाने ओलीको तयारी